सम्पादकलाई प्रचण्डले भेडा र सिंहको किस्सा सुनाएपछि ... - Baikalpikkhabar
सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियाको अन्तिममा प्रचण्डले आफूहरु अन्य दल भन्दा फरक रहेको दावी गर्न सिंह र भेडाको एउटा किस्सा सुनाए ।
‘सिंहको सानो बच्चा शिकार खेल्न आमासँग जाँदै गर्दा छुट्यो आमासँग सानो थियो,भेडाको बथानमा पस्यो । भेडाहरूले पनि सानो भएको हुनाले त्योसँग डराउने कुरा भएन । भेडाहरुले आफ्नो बथानसँगै त्यसलाई पनिसंँगै लिएरै गए । आजभोलि गर्दा गर्दै गर्जिनुपर्ने बेलामा त्यो सिंह पनि भ्या भ्या गर्न थाल्यो । अनि अरू भेडाहरूजस्तै त्यसले पनि विस्तारै घाँस खान थाल्यो । घाँस खान्छ,भ्या भ्या गर्छ । केही वर्षपछि शरीर त सिंहको जस्तै बढेर आयो,हेर्दा त सिंहै हो फेरि ।
शिकार खेल्न आएको सिंहले भेडाको बथानलाई एट्याक गर्न जाँदा सिंह देख्छ त्यहाँ आफूजत्रै दुनियाँमा नभएको । तर,ऊ थर्थर काप्दै भ्या भ्या गर्दै भेडासँग दौडिइराखेको छ । अनौठो लागेछ रियल शिकारीवाला सिंहलाई । त्यो भेडा समात्न छाडेर त्यो सिंहलाई समात्यो के !
तँलाई के भएको ?तँ त सिंह जस्तो छस्,तर भेडाजस्तै थर्थर कामेर भागिराखेको छस् भ्या भ्या गर्दै ।
उ भ्या भ्या नै गरिराख्छ । त्यसलाई समातेर लगेर इनारमा टाउको देखाउँछ । हेरत,तँ त सिंह म र त त एउटै हो नि । कहाँको त भ्या भ्या गरेको ?
भनेर एकछिन इनारमा हेरेपछि भेडाको बथानमा हुर्केको जंगलै थर्किने गरी गर्जिन्छ र त्यसपछि ऊ सिंह भएर शिकारमा जान्छ । मैले यो प्रसंग ‘बाइ द वे’ पूरै मिल्छ भन्ने त मेरो दाबी होइन । कता कता भेडा–भेडासँग हिँड्दा हामी अलिअलि भेडा भइयो कि जस्तो लागेको छ । अब भेडा नहुने बिचार छ !’
सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले ३२ वर्षदेखि आफूहरू एउटै कमिटीमा रहेको बताउँदै सबै जना माओवादी केन्द्र हाँक्न सक्षम रहेको धारणा राखे।
‘अहिले यहाँ रहेका ६ जना नै नभए पनि माओवादी चल्छ, अर्कोले पार्टी चलाउँछ’, प्रचण्डले भने, ‘कसैलाई मन नपर्दैमा यो पार्टी सकिँदैन। शताब्दीसम्म रहन्छ। माओवादीले मुख्य रूपमा गणतन्त्र ल्याउन, व्यवस्था परिवर्तन गर्न खेलेको भूमिका वर्षौंसम्म रहन्छ। हामीले छोडे पनि अर्कोले उठाउँछ।’
आइतबार, ११ पुष, २०७८, बिहानको १०:४२ बजे